Telbee: Bata mameseji ezwi kubva kune Wako Podcast Vateereri | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 23, 2021 Chipiri, Mbudzi 23, 2021 Douglas Karr
Pave neashoma mapodcasts kwandaishuvira nemoyo wese kuti dai ndataura nemuenzi zvisati zvaitika kuti ndione kuti vari kuita uye vachivaraidza vatauri. Zvinoda basa rakawanda kuronga, kuronga, kurekodha, kugadzirisa, kushambadza, uye kusimudzira podcast yega yega. Kazhinji ndosaka ndichisara ndiri ndega.
Martech Zone ndiyo pfuma yangu yekutanga yandinochengeta, asi Martech Zone indavhiyus inondibatsira kuti ndirambe ndichishanda pamatauriro andinoita pachena, inondibatsira kuti ndibatane nevanofurira uye vanhu vandinoremekedza muindasitiri yangu, uye inodyisa chikamu chevateereri vangu chinokoshesa odhiyo pamusoro pezvinyorwa… chimwe chinhu chisingafanirwe kurerutsa.
Telbee ipuratifomu yekutumira mameseji iyo iwe yaunogona kuendesa kutora mameseji ezwi kubva kune vaenzi kana vateereri vepodcast yako. Iyi puratifomu ine mashoma akasiyana sarudzo… kugona kuvaka peji rekuenda raunogona kugovera, widget yaunogona kudzvanya mune chero peji, kana bhatani rekutaura raunogona kuwedzera kune chero saiti uchishandisa script.
Ndakagadzira popup yemessage yezwi Martech Zone Hurukuro mukati memaminitsi mashoma vachishandisa yavo yemahara chikuva. Iyo yakabhadharwa vhezheni ine akati wandei mamwe maitiro ekugadzirisa, asi ndakafunga kuti ndichaiedza kunze. Kana uri kuverenga izvi kuburikidza neemail kana RSS, tinya kusvika kuchinyorwa uye uchakwanisa kuyedza uchindisiira meseji.
Nditumire Mharidzo Yezwi
Telbee Scenarios yePodcasting
Heano mamwe makuru makuru akataridzwa netelbee kuti ashandiswe nepodcasting:
Rekodha zvemukati zvevateereri uye ita kuti mapodcasts ako apindirane - Koka nyaya, mibvunzo uye mazano uye uzvirekode kuburikidza ne telbee. Verenga yedu URL pfupi yekushanyira, igovane kuburikidza nesocial media uye email, kana kuwedzera izwi rekodhi zvakananga kune yako webhusaiti. Nezvishandiso zviri nyore kugadzirisa, teerera uye kupindura - pese pazvinenge zvakakodzera!
Teerera kune - kana kuverenga - zvinotumirwa uye zvigadzirise muinbox yakatsaurirwa - Hapasisina kusefa kuburikidza neemail, zvemagariro feed, maDM uye zvinyorwa kubva kune vateereri vako. Ita kuti hupenyu huve nyore! Tora zvese zvakarekodhwa muinbox imwe chete, nyora kana uchida. Ipa mukana kune vako vaunoshanda navo, vagadziri uye timu yese kugovera uye kutonga. Tamba zvakare zvakananga, maka zvaunofarira, dhawunirodha kuti ugadzirise, kana pindura nezwi!
Wedzera vateereri vako - Bata pasocial media & Kurudzira kugovana -Koka vateveri vako kuti vabatsire podcast yako kuburikidza nechero social media platform, uye varatidze kuti vamwe vanowana yakawanda sei kubva mairi! Inzwa iyo WOW nguva paunopindura - Vanhu vanoifarira paunopindura, uye inokurumidza uye yemunhu nezwi. Ipapo vanozoda chaizvo kugovera zvauri kuita uye kubatsira kukura nharaunda yako.
Sevha nguva uye kushushikana pakugadzira zvemukati uye kutaipa -Kuronga, kurekodha kubvunzurudzwa uye kugadzira zvikamu ibasa rakaoma. Saka tsiva kutaipa nekutaura – zviri nyore uye nekukurumidza! Uye kuderedza kuronga. Shandisa telbee kutaurirana nezwi nechikwata chako uye vabatsiri. Uye kana wakanganwa mubvunzo iwoyo, unoda kudzokororwa, haugoni kuita kuti diaries dzishande kana kungoda kuita kuti hupenyu hwemunhu wese huve nyore, shandisa telbee kunyora vaenzi vako! Iine maturusi ehunyanzvi ekurodha odhiyo, bitrate kusarudzwa uye kupatsanura skrini kuti ugovane mibvunzo.
Telbee yakagadzirawo Gwaro rePodcast Audio Engagement.
Nhungamiro yePodcast Audio Engagement Tanga Iye Zvino neTelbee
Tags: Audiomuunganidzwa wekuteereraaudio commentsfomu yekuteereramameseji ekuteereramameseji ekuteereraaudio widgettelbeeizwikuunganidzwa kwezwimazwi ezwichimiro chezwimameseji ezwimameseji ezwikurekodha izwiizwi widget
Mwedzi: Wedzera Shanduko NeKutenga Kweboka Muchitoro Chako cheShopify